Vivaldi, iyo bhurawuza iyo inoda kuve Opera ine Metro interface | Kubva kuLinux
Vivaldi, iyo bhurawuza iyo inoda kuve Opera ine Metro interface
1 Chii chinonzi Vivaldi?
2 Chii zvino chinouya naVivaldi?
3 Tora Vivaldi
Chii chinonzi Vivaldi?
Shamwari yakangondizivisa Vivaldi, Asi mumwe Browser kuti akaberekwa kuedza kuzadza pakakoromoka kuti dhanzi yakasiya vashandisi vazhinji, asi seyekupedzisira, hapana chimwe chinopfuura Google Chrome nemabasa matsva. Muchokwadi, iri saka Google Chrome, kuti kana tichizoenda Inbox Tichaona kuti tinogona kupinda mukati pasina dambudziko.
Asi ini handidi kuva akaomarara kudaro. Chekutanga pane zvese, ndanga ndichichiyedza kwenguva pfupi, uye ichokwadi kuti inosanganisira zvimwe zvinhu zvidiki zvinonakidza, zvirinani zvinoonekwa. Asi ngatione kuti ndeipi nyaya iri kuseri kwebrowser iyi maererano nevakagadziri vayo (mumwe wevavambi veOpera zviripo):
Muna 1994, mapurogiramu maviri akatanga kushanda pawebhu web browser. Pfungwa yedu yaive yekugadzira inokurumidza browser, inokwanisa kushanda neyakaganhurirwa Hardware, tichifunga kuti vashandisi vanhu vane zvavanoda uye zvavanoshuvira. Opera akazvarwa. Chidimbu chedu che software chakawana traction, boka redu rakakura, uye nharaunda yakagadzirwa. Isu taive padhuze nevashandisi vedu uye kumidzi yedu. Isu tinoramba tichivandudza software yedu, zvichibva pamhinduro yedu kuvashandisi, pamwe nemazano edu panzira yekugadzira bhurawuza rakakura. Isu tinogadzira uye tinovavarira kugona.
Nekukurumidza kumberi kuna 2015, isu takada browser kunyangwe rakachinja mafambiro. Zvinosuruvarisa, haichashande nharaunda yayo yevashandisi uye vanopa rubatsiro avo vakabatsira kuvaka iyo browser pakutanga.
Uye saka tinosvika kune yakasikwa mhedziso: Tinofanira kugadzira nyowani browser. Bhurawuza redu uye bhurawuza reshamwari dzedu. Bhurawuza inokurumidza, asi zvakare bhurawuza iro rakapfuma mukushanda, rinoshanduka zvakanyanya uye rinoisa mushandisi pekutanga. Bhurawuza rakagadzirirwa iwe.
Chii zvino chinouya naVivaldi?
Chinhu chekutanga chatichaona chinongedzo chiri padyo padyo neMicrosoft yeMetro maitiro, ane hunhu hukuru ndewekuti (anoshanda) matabhu anotora ruvara rwewebhusaiti yatiri kushanyira. Ruzivo rwakanaka chaizvo.
Sezvo chinangwa chiri chekuwanazve izvo zvakarasika kubva dhanzi, inogara nhaka maratidziro ezvinhu, mamenu uye kuongorora kwemathebhu paunenge uchitsvedza pamusoro payo, pamwe nemenyu huru muiyo logo yekushandisa. Uye zvakare, isu tinogona kurongedza ma tabo sepakutanga.
Asi pachine basa rakawanda rinofanirwa kuitwa, nekuti kunyangwe iro repaneru riri kushanda, tsamba yacho ichiri kuvandudzwa, asi zvimwe zvese zvinhu zvinoshanda: Mabhukumaki, manotsi, kurodha pasi, nezvimwe ... Sezvazviri mushanduro dzekare dzeOpera, iyo pani inogona kuvanzwa zvachose uye iyo Speed ​​Dial inotaridzika senge yekare.
Iwindo rekufarira rinongova nesarudzo dzakakodzera dzazvino vhezheni yeVivaldi, uye ine zvidiki diki zvekusiyanisa. Ehe, haina kuteedzera chero chinhu kuGoogle Chrome Zvaunoda (sekunge Opera irikuita parizvino) uye pane dzimwe nzvimbo ine zvinhu zvekutanga.
Kunyangwe ini ndakaedza kunyora chinyorwa ichi kubva kuVivaldi, bhurawuza rine matambudziko neWordPress nekuti pandinoedza kuona muchiono, iyo Dhizaina Panel inotakura mune imwe tebhu uye kwete iyo yekutarisa pachayo. Asi sezvandakambotaura, ichiri mudanho rekutanga rekusimudzira, nekudaro, isu tinofanirwa kuziva nezvekushanduka kwayo.
Vivaldi inowanikwa kubva pawebhusaiti yako yemapuratifomu ese (Windows, Mac uye Linux), mune yekupedzisira kesi mumapakeji eDebian neRedHat. Kana tikashandisa ArchLinux, tinogona kuiisa kuburikidza neAUR:
Asi hongu, chete makumi matanhatu nemasere Bits kubva pane zvandaiona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Vivaldi, iyo bhurawuza iyo inoda kuve Opera ine Metro interface
Yakanaka kwazvo, asi ini handidi chaizvo webkit seinjini, ndinofunga inowanzo kuve yega-
Webkit iri kutorohwa neGoogle forogo inonzi Blink (iyo iyo Opera irikushandisa parizvino sezvo vhezheni 14 yakabuda).
asi kubwaira ingori vhezheni yewebhukit yakagadzirirwa chrome. achiri kubhenekera / webkit monopoly
Jhoed gondohwe akadaro
Parizvino ini ndinotarisira kuti Firefox ipatsanure yega yega tabu muitiro wakasiyana sezvinoita Webkit, Firefox <3.
Pindura Jhoed Ram
Ndinovimba kutsamwa ikoko hakuzomboitika.
Muchokwadi zvinodaro. https://wiki.mozilla.org/Electrolysis zvandisingazive kana ichigona kuvhenekerwa mune yazvino vhezheni nekuti ichiri mukuyedzwa.
Firefox haisati yatamira kuBlink kana Webkit nekuti injini yekupa Gecko ichiri kudiwa kudiwa kwayo kana zvasvika pakuratidzira mapeji ewebhu nematanho anotenderwa neW3C.
Ndakaverenga iyi link, asi ndinofunga handina kunzwisisa zvarinotaura, nekuti zvinoita senge kwandiri kuti inongoti inoshandisa nzira imwe chete.
Ndinovimba hazvimboitike! .. ndizvo zvandinofarira nezve firefox! kuva nemaitiro mazhinji hakuna kunaka!
Ndakaiyedza, uye inotaridzika zvakanaka, kana yakati kurei, asi ichava nani. Kunze kwezvo, ndakariisa nerutsigiro rweLatin American Spanish, asi hazviuye kuzoshandura mutauro.
Zvikasadaro, zvakanaka kutanga.
YeKaOS, iri paKCP
Imwe forogo yeChromium inoteedzera iyo Spartan interface? Ini zvirinani kunamatira neOpera Blink 27 (zvirinani yakagadziridza mashandisirwo ayo ezvekushandisa kusvika pakakwirira mune iyi vhezheni).
Ndiri kunzwa Operiptilian, uye ini ndaida Vivaldi, asi ichiri mumatanho ekutanga uye kunyangwe iine kusawirirana, senge presto yekare nehondo yayo yekurwisa Google, ine chiso chakanaka ... ehe, kumhanyisa kumhanyisa iri leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, ini ndoda kufunga kuti ndizvo iro "chinetso-chinetso" che opera 11-12 umo nekumisikidza yaitarisira kuti irongedze peji rese kuti iridhirowe
izvo izvozvi ... ivo vanotarisira
Mumwe munhu andipfuudza rutsigiro rweSpanish?
Mumwe munhu anoziva kuziva kuiisa mu freebsd? Ndatenda 🙂
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn
Plasma 5.2 iripo, ngatione kuti chii chitsva [Yakagadziridzwa]